Hagaajinta iyo hagaajinta habka shubista caaryada qolofta birta | Yingyi
tuurista qolofkawaa isticmaalka ciidda dahaarka leh sida alaabta ceeriin, caaryada waxaa lagu kululeeyaa heerkul gaar ah, iyada oo loo marayo toogashada ciidda, dahaarka si loo adkeeyo ciidda dahaarka leh, qaabeynta, samaynta dhumuc gaar ah oo qolof ah, qolof sare iyo hoose ayaa si wadajir ah loogu xiraa binder, samaynta dalool dhammaystiran oo lagu shubayo wax-is-beddelidda. tuurista Shell waxay leedahay sifooyinka maalgashiga yar ee qalabka, waxtarka wax soo saarka sare, wareegga gaaban, kharashka wax soo saarka hooseeya, boodhka yar ee goobta wax soo saarka, qaylada hoose, wasakhowga hoose ee deegaanka, dhamaystirka dusha sare ee dhejiska, xajmiga xasilloon iyo waxqabadka habka, waxaana si weyn loogu isticmaali jiray baabuurta, mootooyinka, mishiinada dhismaha iyo warshadaha kale.
1 Asal ahaan
Tan iyo markii la hirgaliyay habka tuurista qolofka, wax soo saarka xasilloon oo hufan ee birta kabka qolofka ayaa la gaaray. Si kastaba ha ahaatee, diirka liimiga ah iyo ciidda dhegdheg ee dusha sare ee shubka ayaa la ogaaday in ay si gaar ah halis ugu yihiin soo saaristashubista birta, iyo tayada dusha sare waa liidata. Qaybta diirka liinta iyo ciid dhegdheg leh ee alaabta cilladaysan waa ilaa 50%, taas oo si dhab ah u yaraynaysa waxtarka nadiifinta iyo tayada wax soo saarka ee shubka.
1.1 Hordhac kooban ee habka wax soo saarka asalka ah
Soo saarista qayb ka mid ah alaabta birta ah ee shubka ah, iyadoo la isticmaalayo qolof ciid daboolan habka shubista, Hal nooc oo ka mid ah laba xabbo, laba lakab oo sanduuqyo ah oo is dulsaaran, iyadoo la adeegsanayo xargo laba jibbaaran oo beddelka ciidda toogashada ah.
1.2 Saamiga iyo meesha cilladaha
Meesha iyo tirada cilladaha ayaa la falanqeeyay, diirka liimiga ah iyo cilladaha ku dheggan ciidda ayaa si gaar ah uga muuqday albaabka gudaha iyo dusha sare ee shubka.
2 cillad iyo falanqayn sabab
2.1 Habka samaynta cillad
Diirka liimiga ah waxa loola jeedaa jilibka ama buro ka samaysmay dusha wax shubka marka biraha iyo ciid wax samaynta lagu qaso dusha wax shubista. Marka la shubayo, oogada qolofka ay sabab u tahay xoqid joogto ah oo dareere bir ah oo heerkulkiisu sarreeyo, taasoo keentay in dusha sare ee qolofka burburto, ciidda burburto iyo birta dhalaalaysa si wada jir ah u galaan godka dushiisa wax lagu shubo ee la sameeyay nabar soo baxay, kuwaas oo ah samaynta diirka liinta, nabar iyo cillado kale. Wax soo saarka birta shubka ah kuma badna alaabta birta shubka ah. Ku dhejinta ciidda waa cilad dusha sare ee kabka. Way adag tahay in meesha laga saaro bur-burka ama dhismaha ka sameysan qaabeynta ciidda iyo oksijiinta birta ah ee ku dheggan dusha sare ee shubka, taasoo keentay in dusha sare ee shubka qallafsan yahay, taas oo inta badan kordhisa culeyska shaqada ee nadiifinta, waxay yareysaa waxtarka dhamaystirka waxayna saameyneysaa muuqaalka alaabta.
2.2 Falanqaynta Sababta
Marka lagu daro habka samaynta ciid dhegdheg ah iyo diirka liinta, waxa lagu xukumi karaa in sababaha samaynta ciid dhegdheg ah iyo diirka liinta ee dusha sare ee birta qolofka ah ay yihiin sida soo socota:
(1) Inta lagu jiro habka shubista, heerkulka birta dhalaalaysa waa sarreeyaa, qolofka tuurista ee iridda u dhow waa la kululeeyaa muddo dheer. Sababtoo ah qolof-ciideedka dahaarka leh ayaa si fudud u dumaya oo kululaanaya muddo dheer, qolof ciidda qaybtan ayaa ah mid aad u kulul, iyo burburka qolofta ciidda ee dusha sare ee godka ayaa sababa ifafaale ah inay ku dhegganaadaan ciidda iyo diirka liimiga ah ee dusha sare. ka mid ah tuurista;
(2) Lakabka daawaynta ee qolof ciiddu waa dhuuban, xoogga qolof ciidduna waa yar tahay. Marka heerkulka daadadku sarreeyo ama wakhtiga qulqulaya ee birta dhalaalaysa ay dheeraato oo xoogga qulqulaya uu weyn yahay, dusha sare ee qolof ciiddu way fududahay in la jebiyo oo la jebiyo, taasoo horseedaysa "soo galinta" birta dhalaalaysa gudaha ciidda. qolof, ama qaybaha ciidda jaban iyo birta dhalaalaysa ayaa wada adkeeya si ay u sameeyaan cilada ku dheggan ciidda;
(3) Dib-u-soo-celinta ciidda daboolan ayaa hooseysa. Marka birta dhalaalaysa ay gasho godka, dusha sare ee godka qolofka ciiddu waxa uu bilaabay in uu dumo ka hor inta aan la adkayn birta dhalaalaysa, taas oo horseedaysa in "la soo galo" birta dhalaalaysa gudaha gudaha qolof ciid, ama ciid jaban. Qaybaha waxay ku adkeeyaan birta dhalaalaysa si ay u sameeyaan ciid dhegdheg leh;
(4) Saamaynta xoogga sambabada waa weyn tahay, iyo qaybta sprue ee waqtiga xoqidda waa ugu dheer, sprue waxay si toos ah ugu xiran tahay iridda gudaha, marka heerkulka sare ee birta dhalaalaysa ayaa si toos ah u galay godka, sababtoo ah si qulqulka qulqulaya ee birta dhalaalaysa, u horseedda xididka iridda bacaadka oogada qolof burburtay, ciid sabaynaysa birta dareeraha ah godka.
3. Tijaabada kobcinta iyo falanqaynta habka
3.1 Hoos u dhig heerkulka shubka
Ciidda dahaarka leh ee loo isticmaalo tuurista birta waa maaddada quartz refractory. Heerkulka wax lagu shubayo ayaa ah mid aad u sarreeya ama kulaylka maxalliga ah, kaas oo si fudud u dumin kara, dildilaaca, ciid daadinta iyo ifafaale kale, taasoo keentay in ciidda ku dhegto, diirka liinta iyo cilado kale oo tuurista. Habka wax-soo-saarka caaryada qolofka, si loo dhimo qiimaha wax-soo-saarka, habka shubista qolofta guud ahaan ma isticmaasho daahan refractory, si toos ah ka dib tuurista. Aagga u dhow iridda gudaha ee wax lagu shubayo ayaa loo istcimaalay gelitaanka biyaha. Heerkulka birta dhalaalaysa waa sarreeyaa, qaybta qolofta ciidduna way kululaataa muddo dheer. Dusha sare ee qolof ciiddu way jabtaa, heerkulka sare ee birta dhalaalaysa ayaa sii socota inay xoqdo, taasoo keentay ciid dhegdheg leh iyo diirka liinta. Marka la eego aragtida aan saameyn ku yeelan tayada badeecada, heerkulka ku shubista waa in si habboon loo dhimaa, iyo nooca qolofku waa shubista qolofka qabow. Heerkulka wax lagu shubayo waa inuusan noqon mid aad u hooseeya si looga hortago go'doominta qabow. Sidaa darteed, hoos u dhigista heerkulka wax lagu shubo waxay hagaajin kartaa tayada dusha sare ilaa xad, laakiin si buuxda uma xallin karto dhibaatooyinka diirka liinta iyo ciidda dhegta leh ee dusha sare.
3.2 Hagaajinta dhumucda lakabka adag ee qolof ciid
Lakabka daawaynta ee qolof ciid waa dhuuban, xoogga qolof ciidduna waa yar tahay. Marka heerkulka daadintu uu sarreeyo ama wakhtiga qulqulaya ee birta dhalaalaysa ay dheeraato oo xoogga qulqulaya uu weyn yahay, dusha sare ee qolof ciiddu way fududahay in la jebiyo oo burburo, taasoo horseedaysa "gudaha" birta dhalaalaysa gudaha gudaha qolof ciid. ama qaybaha ciidda jabay waxay ku adkeeyaan birta dhalaalaysa si ay u sameeyaan ciid dhegdheg leh iyo diirka liimiga ah. Lakabka qolofku aad buu u dhuuban yahay, xoogga qolofka ciidda waa la dhimay, waxaana jira khatar ah in kulaylku uu jabo iyo ciidda dhaqidda habka shubidda. Sababtoo ah qaybtan waxaa si toos ah u saameeya birta dhalaalaysa, xoogga qolofta ciidda halkan waxay si toos ah ula xiriirtaa tayada dusha sare ee shubista. Habka wax-soo-saarka joogtada ah, caaryada si dhakhso ah ayaa loo qaboojiyaa, taasoo keentay ifafaalaha abuurista ciidda iyo qolof ciid aan qaan-gaarin. Haddii gunta hoose ee sprue aad u dhumuc weyn tahay, wakhtiga qoloftu waxay u horseedi doontaa gubasho qaybaha kale ee qolof ciideed, iyo xoogga qolofka ciidda waa la dhimi doonaa. Hagaajinta ka dib, qolof ciiddu waxay si buuxda u adkeyn doontaa wax soo saarka joogtada ah iyada oo aan la helin jiilka ciidda iyo maqaarka iyo lafaha.
3.3 Hagaajinta dib-u-soo-celinta ciidda dahaarka leh
Ciidda dahaarka leh waxay leedahay refractory hooseeya. Marka birta dhalaalaysa ay soo gasho godka, dusha sare ee godka qolof ciiddu waxa ay bilaabatey in ay burburto ka hor inta aan la adkayn birta dhalaalaysa, taas oo keenta in ay "soo gasho" birta dhalaalaysa gudaha gudaha qolof ciid ah, ama qaybo ciid ah oo jabay ay adkeeyaan. leh bir la shubay si ay u sameeyaan ciid dhegdheg leh. Ka dib markii la hagaajiyo ka kooban ciidda dahaarka ah, xaqiijinta dufcaddii yar yar ayaa muujisay in ifafaale diir orange on dusha tuurista asal ahaan la baabi'iyey, laakiin ifafaale ciid dhegdheg ah ayaa weli jiray, iyo ciladda ciidda dhegdheg on dusha alaabta aan si buuxda loo xalin karin.
3.4 Wanaaji naqshadeynta nidaamka gating
Nidaamka shubista ayaa saameyn weyn ku leh helitaanka wax-ka-istaagga tayada sare leh. Inta lagu jiro habka buuxinta caaryada, qolof ciid ah oo albaabka u dhow ayaa horay u jaba, taasoo keentay in birta dhalaalaysa ay "soo gasho" gudaha qolofta ciidda ama qaybo ciid ah oo jajaban oo ku adkeynaya birta dhalaalaysa, sidaas darteed waxay sameysaa cillado sida ciid dhegdheg ah iyo diirka liinta. iridka agtiisa iyo diyaarad weyn. Yaraynta xoogga saamaynta dhalaalka ah ee birta dhalaalaysa ee dusha qolofka ciidda iyo kordhinta awoodda buffering ee nidaamka shubidda waxay sidoo kale hagaajin kartaa ifafaale ciid dhegdheg ah iyo diirka liinta dusha sare ee alaabta. Nidaamka shubista qulqulka joogtada ah waxaa loo arkaa inuu beddelo nidaamka shubista asalka ah, kaas oo ka dhigaya birta dhalaalaysa ee soo gelaysa daloolka mid deggan oo yaraynaysa xoogga xoqidda qolofka caaryada. Qaabka xayndaabku wuxuu qaataa trapezoid siman, kaas oo yarayn kara ifafaale qulqulka qulqulka qulqulka ee birta dareeraha ah waxay garaacdaa qolofta ciidda. Dhererka sprue waa inuu ahaadaa mid gaaban sida ugu macquulsan si loo yareeyo cilladaha sida go'doominta qabow iyo qulqulka qulqulka sababtoo ah qaboojinta birta dhalaalaysa.